Google Play ga-enwekwu ndị ọrụ iji nyochaa ngwa | Gam akporosis
Google Play nwere nsogbu kachasị na ngwa ndị e bipụtara n'ime ụlọ ahịa. Ebe ọ bụ na n'agbanyeghị ọtụtụ ngwaọrụ na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ngwa ndị ahụ mepụta nsogbu ma obu kesaa malware na gam akporo. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na afọ gara aga enwere ụlọ ọrụ dị mma na nke a. Enwere ike ịhụ ya na akụkọ nchekwa kpughere izu ole na ole gara aga.
Ọzọkwa, ngwaọrụ dị ka Play Chebe bụ nnukwu enyemaka na Google Play. Mana ụlọ ọrụ ahụ ekwetala ọdịda ya. Ya mere, ha na-ekwuwapụta na ha na-ewere usoro ọhụụ n'akụkụ a. Measuresfọdụ jikoro gafere ụgwọ nke ndị ọrụ ọzọ, iji nyere ha aka inyocha akwụkwọ ndị e bipụtara.
Ogologo oge ọrụ a na-eme na ndozi na nke a na Google Play. A na-achọ ya n’ụzọ doro anya iji nwekwuo nchebe na ụlọ ahịa ngwa. Ihe na-arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ikpe nke malware ma ọ bụ ngwa ọjọọ nke zoro ezo n'ime ụlọ ahịa ahụ belatara. Ọ bụ ezie na ọ ka na-adịkarị na enwere otu nke mechara banye na ya.
Ọ bụ ya mere, afọ gara aga mgbanwe ka emere na ikike, na-amachibido ma ọ bụ wepu site na ụlọ ahịa ahụ ngwa ndị ahụ rịọrọ SMS ma ọ bụ kpọọ ikike na-enweghị ya ịbụ ihe dị mkpa maka ịrụ ọrụ ya. Nzọụkwụ dị mkpa dị mkpa nke ụlọ ọrụ na nke a, bụ nke kwenyere na ngwa. Ugbu a, a na-ekwuputa mgbanwe ohuru iji melite ọnọdụ na ngwa ngwa.
Google Play ndozi
Ọ bụ ya mere, Google Play na-abụzi mea culpa n'echiche a. Companylọ ọrụ ahụ achọpụtala na ha chọrọ ndị ọrụ ọzọ ka ha nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na nke kwesịrị ekwesị megide ngwa ọjọọ ndị a ma ọ bụ nke na-eweta nsogbu na ụlọ ahịa ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ achọpụtakwala ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ a ghaghị imezi ngwa ngwa.
N'otu aka, ụdị ndị mmepe ahụ na-ahụ anaghị edo anya oge niile, ihe na - eme ka o sie ike ịmechaa ha. Ya mere, ha na-eche nsogbu mbụ ihu na mbụ. Ihe bụ ihe ọzọ, oge nchere na-adịkarị ogologo. Ma oge nchere na nyocha na usoro mkpesa. N'ihi ya, mgbanwe kwesịrị ime n'akụkụ a iji belata ha.
N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị mmepe emeela mkpesa na usoro nke na-ebugote ngwa ọdịnala na-niile akpaghị aka. Ọ dị ka enweghị aka mmadụ n'ime ya. Ihe ọzọ bụ na ọtụtụ ndị kwetasiri ike na inwe ike ịkpọtụrụ mmadụ n’oge ahụ siri ike ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume. Nke a bụ ihe Google Play chọrọ ịme mgbanwe na, na-ego ndị ọrụ ọzọ. Ebe ọ bụ na ndị mmepe ga-enwe enyemaka dị otú a na usoro a. Nke kwesịrị ime ka ọ dịrị ha mfe ka ha bulite ngwa ha, na ha ziri ezi na enweghị ọnya.
Etu esi akọ akụkọ dị egwu na Google Play
Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta usoro ihe omume, ebe anyị na-ahụ ọtụtụ ndozi. Ya mere, bulite ngwa na Google Play ga-abụ ihe dị mfe maka ndị mmepe niile nwere mmasị. N'otu aka ahụ, a ga-enye ọtụtụ nkọwa zuru ezu n'oge niile. Ọ bụrụ na ajụrụ ngwa, a ga-akọwa ihe niile kpatara nke a ji mee. Ya mere na onye nrụpụta maara kpọmkwem ihe ọ ga-agbanwe na ya.
Ọzọkwa, usoro mkpesa ahụ ga-adị mfe site ugbu a gaa n'ihu. Ebe ọ bụ na ozi ịntanetị ndị Google na-eziga ga-enyekwara aka ịmata ihe aga-eme na nke a. Nke ga-ebelata oge a kara aka maka usoro a, na mgbakwunye ịme ya dị mfe na izugbe. Nzọụkwụ dị mkpa, na mgbakwunye na ịnwekwu ndị ọrụ. Anyị amaghị mmadụ ole a ga-ego ọrụ, mana ha emeela ka o doo anya na ọ ga-abawanye n'oge na-adịghị anya n'akụkụ a. Kedu ihe ị chere gbasara ndozi ndị a na Google Play?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Google Play ga-ewe ndị ọrụ ọzọ iji nyochaa ngwa
Kacha mma smartphones na-enye pụọ na'sbọchị Ndị Nne